Category: Qoricha ulfa baasuu
Posted on 14.10.2020 (14.10.2020) by Douzshura
Namni umuriinsaa waggaa 59 ta'e Ashiliin yeroo dhukkuba garaa bu'aatiif yaala argachuuf gara hospitaalaa deemu innis ta'e doktoroonni HIV qabaata jedhanii hin yaanne.
Ashiliin erga saal-quunnamtii of eeggannoo hin qabne raawwatee waggaa sadi booda ture kan qorannoo HIV taasise. Mudannoo isa mudate waan hin baratamne miti- akka 'Public Health England' ibseti bara keessa gameeyyii ganna 50 ol ta'an kudhan keessaa jaha qorannoo HIV yeroodhaan hin taasifne jedha.
Ta'us garuu miti, dhukkubbiin kan nama hundaati. Sagantaan Viiktooriyaa Deerbishiiree gabaasa 'Public Health England' irraa fudhateen akka ibsetti namoonni ganna 45 ol keessatti argaman saaxilamummaan dhukkubboota saal-qunnamtiin daddarbaniif saaxilamuunsaanii waggoota shan darban keessatti tokko sadaffaan dabaleera jedha.
Ogeessi fayyaa saal-qunnamtii Noorah O'Bireen akka jettetti namoonni gameeyyiin dhukkubichaaf saaxilamoo akka ta'an hin yaadan jetti. Namni ganna 63 Kaaren Noortan jedhamu Afriikaa keessatti waggoota muraasa dura lakkofsi namoota HIV qabamanii akka dabalu kan taasise fakkeenyadha.
Kareen ilaalchi namoonni isheef qaban ni jijjiirama jettee waan sodaataa turteed qorannoo taasisuuf yeroo dheeraa itti fudhateera. Ani fakkeenya lubbuun jirudha. Gabaasni ji'a darbe ifa godhame tokko akka agarsiisutti UK keessatti eega bara as lakkofsi namoota HIV'n qabamanii hir'ateera- keessumaayyuu namoota saala lama qabaniifi gaa'ila saala wal fakkaataa raawwatan keessatti. Dabalataan dhaabbanni 'Terrence Higgins Trust' akka jedhetti xiyyaffannoon namoota vaayirasicha waliin jiraatan qofaaf osoo hin taane haawasa hundaaf kennamuu qaba jedha.
Aleed Osboorn dhaabbata namoota HIV waliin jiraataniif gargarsa kennurraa akka jedhetti namoonni ganna 50 ol HIV'n dhukkuba namoota saala wal fakkaataa ta'anii gaa'ila raawwatan qofa akka ta'etti yaadu.
Kun yaada dogoggora qabudha jedhee amana jedha. Nmaoonni gameeyyiin duula bara 80'oota fi 90'oota keessa HIV irratti taasifamaa ture ni yaadatu. Akkas ta'us waa'eesaa odeeffannoo gahaa ta'e hin qaban jedha.
Yaala gahaa ta'e qabna," jedha. Namoonni qoricha farra HIV fayyadaman namoota biroo wlaiin wal bira qabamee yoo ilaalamu lubbuunsaanii balaa irra jira.
Ta'us garuu namoonni sadarkaa dhukkubichi sirna ittisaarratti miidhaa geessuu jalqabe isaan sadarkaa duraarratti yaala argatan waliin wal bira qabamanii yoo ilaalaman carraa dhukkubbichaan du'usaanii guddaadha. Homaa natti hin fakkaatu.
Ta'us garuu saffisaan arguu dhabuusaaniiti kan na aarsu," jedha Ashiliin. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Ta'us garuu vaayirasichi sirna ittisa dhukkubaa Ashilii miidhuu jalqabee ture. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Ingiliiz: Namtichi HIV'dhaan dhibamaa ture seelii haaraa argachuun fayye. Isin hin darbiin.Bara barnootaa tti qabxiin kutaa 11ffaa ittiin galan dhiirotaaf 2.
Qoramtootni galgalaa fi dhuunfaa dhiirotaaf 2. Qaama miidhamtoota dhagahuu hin dandeenye dhiirotaaf 1. Naannolee deeggarsa addaa barbaadan, horsiisee bulaa fi naannolee rakkoo nageenyaa turetti dhiirotaaff 1.
Barattoonni kanaan dura qabxii 2. Eejansichi bara barattoonni miiliyoonni 1. Barattoota qormaataman keessaadardarran,ammoo shamarrani. Kanneen keessaaidileedhan,dhuunfadhaan, 6, galgala barnoota isaanii kan hordofanidha. Misoprostol: ulfa irraa baasa miscarriage 6.
mucayyoo abbaa mana madaami irraa ulfa taate
Nitroimidazole Metronidale and Tinidazole : keessumaa torbee 12 jalqabaa irratti 1st trimester fudhatamuu hin qabu. Griseofulvin: ulfa irraa baasa spontanous abortion 9. Methotrexate: rakkoo dhalootaa fida.
Thalidomide: rakkoo dhalootaa fida. Fkn harkaa fi ykn miilli uumamuu dhabuu ykn gabaabbachuu. Estradiol Clomiphene citrate: rakkoo dhalootaa fida Medroxyprogestrone acetate: rakkoo dhalootaa fida Anticonvulstants Trimethadione,Valporic acid,Carbamazepine, :rakkoodhalootaa fidu Androgens: rakkoo dhalootaa fidu HUB: kanneen armaan olitti eerraman malee qorichootni baayyeen yeroo ulfaafudhatamuu hin qabne jiru.
Kanaaf qaamota kanneen biroo irra dhiiguuf saaxilamaadha. Funyaan keenya quba gudaa fi quba elemtuu gidduutti jabeessinee qabachuudhaan gara lafee jalatti argamuutti gadi dhiibuu.
Gara fuulduraatti xiqqoo gadi jechuu. Gara dudduubaatti jechuun dhiigni akka ujummoo nyaataa ykn ujummoo qilleensaa seenu taasisa malee dhiiga dhaabuuf hin gargaaru. Gadi ciisuu dhiisuu. Funyaan keenyaa waan dhiigaa jiruuf sadarkaa onnee olitti above heart level eeguu qabna.Akkuma beekamu dhukkubni busee dhukkuba gammoojjii ti, garuu jabana kana iddoo tokko tokkotti giddu- galeessa gammoojjii fi baddaatti argamuutti jira.
Dhukkubni busee kun irra caalaa isaa ijoolleetti hammaataa akka jiru hundi keessan iyyuu ni beektu. Dhukkubni busee dhukkuba nama dhukkubsate irraa gara nama fayyaatti darbuu dha. Akkuma beekamu biimbeedhaan nama tokko irraa gara nama biraatti darba.
Biimbeen jermii yookiin raammoo dhukkuba kana fiduu waliin dhiiga nama dhukkubsatu irraa xuuxxee ogguu dhiiga nama fayyaa xuuxuuf jettu jermii kana gorora ishee keessaan nama fayyaatti dabarsiti jechuu dha. Biimbeen dhiiga namaa soorattus dhalaa ishee ti malee inni dhiiraa dhiiga namaatiin hin bulu.
Hojjaan yookaan aadaan akkasii kun dhukkuba busaa daddabarsuu duwwaa utuu hin taane dhukkuba sabbata waaqayyoos ni daddabarsa. Yeroo ammaa kana keessa innumti laafaan iyyuu qoricha tokko tokko kan akka kiloorokuwiniifaa dhagna godhachuu jalqabeera. Kun egaa uummatattis hakiimotattis rakkina guddaa fidee jira. Qorichi ittisaa kunis kiloorookuwin kan jedhamuu dha.
Utuu bakka buseen jirtutti hin deemin oggaa torban tokko hafu lama fudhachuu. Namootni danuun yeroo dheeraadhaaf waan dhukkubsataniif hojiin hin hojjetamin hafa. Hiyyummaaf deegnis dhufa jechuu dha. Nama busaan dhukkubsatee qoricha kuwiinin kan jedhamu fudhataa jiruufis sukkaara kennuun yookiin nyaata sukkaara qabu kennuun barbaachisaa dha. Yeroo jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO iyyuu waan busaa kana itti rakkataa jiru kana.
Garuu, yeroo aarichi badu biimbeen waan manuma keessa jirtuuf mana aaraan ukkaamsuun hedduu nama hin gargaaru. Aarri ujummoo qilleensa gara somba keenyaatti fudhannuun hubuudhaan dhukkuba qufaa, keesumaa ijoolleetti fidee miidhaa fayyaa biraa nama irraan gaha. Bulchiinsi biyyaa fi dinagdeen biyyaa, dinagdeen biyyaa fi fayyaan uummataa, fayyaan uummataa fi bulchiinsi biyyaa walitti hidhatanii amartii yookiin geengoo yookiin fuuncaa tolchu.
Bulchiinsi biyyaa gadhee taanaan dinagdeenis fayyummaan uummataas gadhee dha. Dinagdee guddifatanii fayyaa argachuuf bulchiinsa baheessa tolfachuun waan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf barumsa fayyaa kana hojii irra oolchaa fayyaa argachuu.
Fayyummaa argatanii hojjechuu. Hojjetanii qabeenya argachuu. Qabeenyaan waan hundaa hojjeta, jireenya ilmoo namaas ol kaasa. Ogeeyyiin fayyaa oromoo ummata oromoof kan hojjechuun dirqama oromummaatu irra jira. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account.
You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Search for: Search. Mallattooleenis akka kanaan gadii ti: Dhukkubni ayinaa arfanuu mallattoon waliin qaban hedduu dha. Maaliif laydaan yookaan dhagna gubaan dhukkuba kana keessatti akka jiraatu uummata barsiisuun barbaachisaa miti. Laydaan dhukkuba busee keessatti dhufu sadarkaa sadii qaba. Sadarkaa qabbanaa — Dhukkubsataan kun dhaamocha dhamocha kan jedhamutu itti dhagahama.
Akkasumas ni roqoma. Sadarkaaleen dhagna gubaan kun caalaatti kan argamu ayinaa busee pilaasmoodiyem vivaaksii keessatti.Yaadawwan Ilaali. Torban kana keessa kutaalee Yunaayitid Isteetis hedduu keessatti ulfa of irraa maasuu ka mootummoonni naannolee biyyattii hedduun seerawwan mirga ulfa of irraa baasuu daangessan baafataniin jajjabaachuu dhaan suuta suutaan seera manni murtii muummichi Unaayitid Isteetis bara baase kan dubartoonni ulfa of irraa baasuun mirga heerri eeyamu jedhu dhura dhaabachuu dandeenya abdii jedhu itti horee jira.
Kun immoo kanneen ulfa of irraa baasuu deggeran aarii dhaan kakaasee utuu filannoon prezidaantummaa bara dhfuu hin geggeessamin dura dhimmi kana wal falmii siyaasaa keessatti iddoo ol aanaa qabsiisaa jira jedhama. Xurree ittiin seenan Gara gabaasaatti darbi Gara fuula ijootti deebi'i Gara barbaadduutti cehi. Learning English. Barbaadi Barbaadi. Tarree gabaasaalee sagaleedhaan.
Viidiyoo VOA60 Afrikaa. Tamsaasa isa booda.
Sagantaa- Jimaata. Previous Next. Caamsaa 22, Yaadawwan Ilaali Print. Embed share The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard. No media source currently available. Yaada kenni. Kanaas caqasuu feeta ta'a.
Back to top.Seenaa dubartii Oromoo guyyaa hojii barbaacha baate, nama hojii ishee qacarsiisuuf waadaa seeneen gudeedamtu dubbattuufi bu'aa bahii hedduu keessa dabarte waliin walbaraa. Godina Wallagga Lixaatti kan dhalatte Mooneet nageenyasheef jecha maqaan jijjiirameera akkaataan guddinashee haala mijataa keessatti hin turre. Qoraan gurgurtee rakkoo meeqa dandeessee nu guddiste. Gaafa humna isheetii ol ta'u ana namaaf na kennitee mana namaattin baradhee guddadhe" jetti.
Qabxii gaarii waan hin arganneefis bara mana namaa kana dhiistee hojii humnaas ta'u hojjechaa, barumsa ishee itti fufuu fi harmeeshee hiyyummaan miila qabe gargaaruuf imala jalqabde. Magaalli isheen hojjechaa barachuufi wal'aansoo jireenyaa itti mo'achuuf filatte ammoo Bishooftuu ture.
Magaalli Bishooftuu ammoo akka jireenya baadiyyaa Najjoo kan isheen keessatti guddatteen walfakkaataa ta'uu dhabuun bakka mucucoon jireenyaa itti ishee jalqabe ta'uu yaadatti Mooneet.
Afaan wallaaluunis rakkoo biraati. Kanaaf namoota waliin akkan barbaadetti walqunnamee hojii argachuuf na rakkise" jetti. Taateen Bishooftuutti guyyaa tokko ishee mudate garuu jireenyashee kallattii isheen hin yaannetti kan oofe abdis kan kutachiisu ture.
Namoonni sadii natti dhufanii na dubbisan. Afaan Oromootiin na dubbisnaan nan gammade.
Anis rakkoo kiyya ittan hime. Isaan keessaa inni tokko hogganaa dhaabbata wayii akka ta'eefi akka naqacaru waadaa naaf seene" jetti. Waan baay'ee erga haasofsiisaniin booda gulantaan itti aanu adeemsa qacarrii fakkaatu gaggeessuudhaaf gara bakka 'waaajjira' jedhameetti isaan waliin imalte. Mooneet ragaalee barnootaashee qabattee deemaa waan turteef yeroosuma adeemsa qacarrii raawwachuu akka danda'amuu fi namni sin qacara jedhuun kunis chaappaa adda addaa qabatee waan jiruuf adeemsichi shakkuufillee hedduu kan nama dhibu hin turre jetti.
Namoonni lamaan akkuma kiyya akka hojii qaxaramuuf deemaniitti kan wajjin bakka waajjira jedhame deemne. Qe'een ishee fuudhanii deeman kuni mooraa bal'aa kan waajjiras, mana jireenyaas hin fakkaanne, kan namnuu waan keessa jiraatu hin fakkaanne ta'uu yaadatti. Hanga yoonaatti Mooneet gochi kuni kiyyootti akka ishee dhiheessaa jiru shakkuu hin dandeenye.
Diraamaan taatota sadaniin hojjetamus itti fufe. Animmoo ala taa'een dabaree ittiin qacarrii hojii raawwadhu eegaa ture. Namoota kanaaf yeroo chaappaan rukutamuuf aluma taa'een dhagaha" jetti Mooneet. Amma dabareen kan Mooneet waan ta'eef suuta jettee ulaa dhodhooftee mana nama qacarrii raawwata jedhame kanaatti seente.
Anis taa'etuma osoon eeguu, tasuma ka'ee balbala cufee fuula kiyya mormaa oli wayiin nahaguugee ijakoo akka hin argine akkan sagalees hin dhageessifne godhee nagudeede" jetti. Guyyaa sana dhukkubbii hamaan waan itti dhagahameef ofis ta'ee nama ishee miidhe kana beekuu akka hin dandeenyes yaadatti. Yeroo sanatti karaarra ciisee rakkoo haadha kiyyaatu natti dhagahama ture.
Erga karaarratti kuftee miirota lama waliin waldhaansoo keessa turte, of ajjeesuu moo dhiisu kan jedhu. Tarkaanfii ofirratti fudhachuuf qalbiinkoo takkaa dhiisi takkaa godhi naan jechaa ture jetti. Dhumarratti ''kuni homaa miti kan kana caaluyyuu nan darba, inuman yaala malee of hin ajjeesu jedheen murteesse.
Nama waanuman miidhame kana itti himadhullee dhabuun garuu caalaatti namiidhe," jetti. Boodarra birrii of harkaa qabdu keessaa 'n mana kireeffattee hojii humnaa hojjechuu eegalte. Haadhashee rakkoo keessaa baasuun galma ishee kan dhumaa ture. Jireenya hojii humnaa hojjechuurra biyya alaa baatee hojjechuu wayya kan jedhuun adeemsa garas ishee geessu jalqabuus ni himti. Qorannoo fayyaa kanarratti waanin takkaa hin eegnen dhagahe.
Miidhama amma duraarraa osoon hin bayyanatin ammoo rakkoo dabalataa keessa seenuun kiyya garmalee hamilee namiidhes jetti. Ulfa ji'a afurii fi guyyaa 13 ta'eera naan jedhan.Jalqabarratti araada addiction jechuun maal jechuudha? Araada addiction jechuun: Dhibee yeroo dheeraaf namarra ture, kan wantoota araada nama qabsiisan fayyadamuu dhaabuu ykn irraa of qusachuu nama dhorkuufi miidhaafi dhibee inni fidu osuma beekanii fayyadamuu jechuudha. Haala fayyadama araadawwan garagaraarratti seerri biyyaallee dhiibbaa guddaa qaba.
Sababa alkoolii qofaan akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti namoota miliyoona 3. Gara biyya keenyaatti yoo deebinu qorannoowwan adda addaa akka argisiisanitti lakkoofsi namoota araadaan qabamanii jiranii hedduu sodaachisaadha. Akka fakkeenyaatti qorannoon Magaalaa Adaamaatti geggeeffame tokko akka argisiisutti, namoota araadaan qabaman keessaa harki 70 aradaa tokkoo ol kan qabaniidha.
Haala umuriin yoo ilaallu heddumminni namoota araadaan qabamanii waggaa 15 haga 24 jidduu kan jiraniidha. Akkasumas qorannoon Yunivarsiitii Haramaayaarratti geggeeffame tokko akka ibsutti barattoonni dhibbantaa Walumaagalatti namoonni araadawwan garagaraa kan eegalan: dhiibbaa hiriyaa, fakkeenyummaa namoota beekamoo akka taphattoota kubbaa miilaafi taatota fiilmiidhiphina sammuu ofirraa fageessuuf yaaluufi kkf jedhamee yaadama.
Qorichooonniifi araadonni biroo adda addaas akkasuma dhiibbaafi dhibee fayyaa mataasaanii fidan qabu. Wayita ammaa Yuniivarsiitii Arsiitti barsiisaa jiru. Sign in. Log into your account. Password recovery. Recover your password. Friday, April 17, Arabic Amharic English. Forgot your password? Get help. Ethipian Press Agency.
Home Mijuu Damaakasee Araadaafi fayyaa. Hambaalee Godambaa Magaalaa Jimmaa. Abukaatoo hidha guddichaa Saawudii Arabaa hamma. Dagannaa keessaa yaa bahamu.Kanaaf dabaree dabareedhaan baafachuu qabna. Ganama yoo hojii deemnu sababoota garagaraan ciree ososs hin nyaatiin deemuu. Utuu dhukkubsatanii boqonnaa fudhachuu dhiisanii sammuu ofii hojjachiisuu 5. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu.
Nyaatamuun ilkaanii dental caries kan nutti dhufu yoo ilkaan keenya asidii baakteriyaa ilkaan keenya gidduutti walhoraniin hubamudha. Kana ittisuuf maal gochuu qabnaa? Saamunaa ilkaanii flouride of keessaa qabuun guyyaatti al lama ilkaan keenya ququlleeffachuu. Bishaan uumamaa dhuguu. Hidhii jiisuuf yokaan laaffisuuf jecha harraabuu ykn arrabaan xuuxuun irraa of eeguudha.
Isheen Eenyu 18: 'Guyyaa tokkotti gudeedamee garaatti na hafe, HIV'nis qabame'
Yeroo hedduu yoo afuura baafannu funyaaniin afuura baafachuu amaleeffachuu qabna. Kanaaf osoo hin dheebotiin illee dhuguudha.
Waantoota qaamni keenya akka alagaatti ilaalee lolu allergens akka qalamoota garagaraa fi keemikaalota hidhii keenyarraa eeguudha. Gogaa keenya cunqursuu dhiisuudha. Yeroo dhiqannaa gabaabsuudha. Tamboo xuuxuun gogaan keenya akka umurii malee shuntuuru wrinkles taasisa. Mayo Clinic. Misoprostol: ulfa irraa baasa miscarriage 6. Nitroimidazole Metronidale and Tinidazole : keessumaa torbee 12 jalqabaa irratti 1st trimester fudhatamuu hin qabu. Griseofulvin: ulfa irraa baasa spontanous abortion 9.
Methotrexate: rakkoo dhalootaa fida.
Kanaaf qaamota kanneen biroo irra dhiiguuf saaxilamaadha. Funyaan keenya quba gudaa fi quba elemtuu gidduutti jabeessinee qabachuudhaan gara lafee jalatti argamuutti gadi dhiibuu. Gara fuulduraatti xiqqoo gadi jechuu. Gara dudduubaatti jechuun dhiigni akka ujummoo nyaataa ykn ujummoo qilleensaa seenu taasisa malee dhiiga dhaabuuf hin gargaaru. Gadi ciisuu dhiisuu. Funyaan keenyaa waan dhiigaa jiruuf sadarkaa onnee olitti above heart level eeguu qabna.
Kunis ujummooleen dhiigaa xixiqqoon akka kottoonfatan waan gargaaruuf. Kitaaba dubbisaa ciisaa 5. Sa,aatii ammaa ammaa hin ilaaliinaa 6. Muuziqaa waan sagalee qaban of irraa fageessaa 8.
Celebrity personal assistant placement agencies
Yardie cast imdb
thoughts on “Qoricha ulfa baasuu”